How'd it happen and more reports?: အိမ်ထောင်ရှင်တွေ ဘယ်လောက်များ ရိုးသားကြပါသလဲ?
ရွှေအိမ်တွေမှာ ဌားနေတော့မှာ အိမ်ဌားမရဆိုးလို့ ဘာမဆိုဌားပေးတတ်တဲ့ ရွှေအိမ်သူကြီး တွေဌားတဲ့အမိရွှေမမလေနှင့် ရွှေလေးတွေအတူနေထိုင်တဲ့ စနစ်လေးတွေ ဒီစကာင်္ပူမှ တော်တော်ကို ခေတ်စားနေမှန်း သိတော့တယ်ဗျ....
အလွန်အံ့သြစရာကောင်းနေတာက အခန်းလာဌားကျတဲ့ အိမ်ဌားအတွဲတွေ တော်တော်များများက လင်မယားမဟုတ်ကျတဲ့ အတူနေအတွဲတွေချည်းဖြစ်နေတာကိုး...လွတ်လွတ်လပ်တွေရှိသလို တချို့ကတော့ မလွတ်မလပ်တွေဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ အလွန်ကိုအံ့သြပြီး သူတို့က ဘာမှာမဖြစ်
သလိုပါဘဲဗျ...Sponsor ရကျလို့လား မိမိစိတ်ဆန္ဒအရ စိတ်ပါလာလို့ လားတော့မသိပါဘူး... ပြဿနာတွေများဖို့ဘဲရှိတော့တာပေါ့....ဒီအထဲမှာ အကြောင်းအမျိုးနှင့် ကျောင်းလာတက်ရင်း ကျောင်းသူအစစ်တွေကော အတုတွေပါ အသက်ငယ်တဲ့ လူငယ်တွေထက် လူကြီးပိုင်းလူအိုတွေ ပိုများပြီး ပိုဆိုးတာက မလိုလားတဲ့ လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှု ပြဿနာတွေ တက်ဖို့ဘဲ ရှိပါတော့တယ်..... ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ တဖြေးဖြေးပိုပြီးများလာသလို နေရာစုံသတင်းစုံကြားနေရတော့တာပေါ့...တချို့ဆို ပြန်သွားရင် ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူးဆိုပြီးနာက်ကြောင်း မရှင်းမကင်းဘူး သိသိကြီးကို ကဲနေကျတာကိုလဲ တွေ့နေရ တယ်.... တကိုယ်ရည်အထီးကျန်မှုနှင့် အလုပ်ပန်ပင်းဒဏ်ကို တခါဏတာစိတ်ဆန္ဒ အာရုံခံစားမှု တွေကို ဖြေဖြောက်နေတာလဲပါမှာပေါ့...ဒါကြောင့် အမိမြေက မိဘတွေ မိမိသားသမီးတွေကို နိုင်ငံခြားကို ပို့ချင်
ရင် သိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံး နိုင်ငံတကာမှာ ပြောင်းလဲလာကျတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်း ပြောင်းလဲမှု
ကြီးတခုဖြစ်နေတာကို သတိထားမိစေဖို့တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...မိမိသားသမီးတွေ ငွေရှာနိုင်တယ် ပညာရေးတိုးတက်ဆိုပြီး လွှတ်ထားချည်းမရပါဘူးပြောချင်တာပါ.... အရွယ်ရာက်ရင် အိမ်ထောင်ချ ပေးသင့်တဲ့ အချိန် အရွယ်ရောက်ရင် သင့်တော်တာတွေနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခုိုင်းလိုက်ကျပါ... ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်နေသူတွေဆိုရင် အတူနေခေါ်လို့ရကျတဲ့သူတွေနှင့်ဘဲဖြစ်စေချင်တယ်...
နိုင်ငံခြားသားနှင့်ဆိုရင်တော့ လူနေမှုစရိတ်ပိုကြီးတဲ့အတွက် တသက်လုံးအတူတူ အလုပ်လက်တွဲ အလုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာ သိထားစေချင်တယ်... အမိမြေကလို မိန်းခလေးက အိမ်မှာထိုင်စားနေ လို့ မရပါဘူး ဆိုတာသိထားစေချင်ပါတယ်....
ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်သုံးလိုက်တယ်ဆိုတာ ယောက်ျား မသိအောင် ပစ္စည်းပေါ်မှာ ကပ်ထားတဲ့ ဈေးနှုန်းစက္ကူကိုများ ခွာဖူးကြပါသလား။
ဒါမှမဟုတ်၊ ကလေးတွေရဲ့ ကိစ္စတစ်ခုခုကို ဖအေကြီး မသိအောင် ဖုံးထားတာမျိုးရော ရှိလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း တခြားတစ်ယောက်ယောက် ကို ဖျိုးခနဲ၊ ဖျတ်ခနဲ စိတ်ကစားမိသွားတာကို ခပ်မဆိတ် နေလိုက်ဖူးသလား။
“ကိုယ်လိုချင်တဲ့အချစ်ကိုရယူခြင်း - စုံတွဲများအတွက် လမ်းညွှန်”ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ရေးသားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးပါရဂူ ဟာဗှစ်လ် ဟဲန်ဒြစ်ခ်စ်က ဖြေပါတယ်။ “ယောက်ျားတွေဟာ သူတို့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ဖော်ပြတတ်ကြတယ်။ အဲသလို ပြတတ်တဲ့ အတွက် အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာတွေ ရှိနေတဲ့အခါမှာလည်း ဆွေးနွေးဖို့ အစဖော်သူလို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့တော့ ထင်ကုန်တတ်ကြတာပါပဲ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ယောက်ျားတွေအတွက်က ကိုယ့်ခံစားချက်ကို စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ကျူးဖို့ မိန်းမတွေထက် အပုံကြီး ပိုခက်တာလည်း အမှန်ပဲ”တဲ့။
(၂၀၀၃ ခုနှစ် မတ်လထုတ် သရဖူမဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တာလေးကို ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်တာပါ။) ဆရာအတ္တကျော်ရဲ့ဘလော့ မကူးယှူမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်..http://lettwebaw.mylovecafe.com
ကမ္ဘာကျော်တဲ့(၄)ကြွင်းဖွားတွေရဲ့စာရင်းကတော့– အမေရိကန် သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး ဂျွန်ပီးယားပွန့်မော်ဂန် (Jr) ၊ ရေနံ သူဌေးကြီး ဂျွန်ဒီ ရောက်ဖဲလား၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဟင်နရီ ကစ်ဆင်းဂျား ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဂျပန်များကို တိုက်ထုတ်ရာမှာ အဓိကကျခဲ့သူ ဗြိတိသျှ ဗိုလ်ချုပ် အော်ဒီ ၀င်းဂိတ် ၊ ပူလစ်ဇာ ဆုကို တီထွင်ခဲ့သူ ဂျိုးဇက် ပူလစ်ဇာ ၊ ဟောလီးဝုဒ် မင်းသားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မင်းသားကြီးမာလွန်ဘရန်ဒို ၊ မင်းသားကြီး လီးမာဗင် ၊ မိုက်ကယ် ဒေါက်ဂလပ်စ်၊ မော်ဂန် ဖရီးမင်း၊ ရော်ဘင် ၀ီလီယံ ၊ ဒတ်စတင် ဟော့ဖ်မန်း ၊ ကြေးနန်းကို တီထွင်ခဲ့သူမာကိုနီ ၊ လကမ္ဘာ ပေါ်ကို ပထမဆုံး ခြေချနိုင်ခဲ့သူ နေးလ် အမ်စထရောင်း ၊ ဆီးရီးယား သမ္မတ ဟာဖစ် အာဆတ် ၊ ဘိုးရင်း လေယာဉ်ပျံ ကုမ္ပဏီ ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ၀ီလီယံ ဘိုးရင်း ၊ သိပ္ပံပညာရှင် မဒမ် မာရီ ကျူရီ ၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ပြိုကွဲပြီး ပထမဆုံး ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဘောရစ် ယဲ့လ်ဆင် ၊ ကမ္ဘာကျော် Pop ဘုရင်ကြီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ၊ ဟောလီးဝုဒ်မင်းသား ဂျူဒ်လော၊ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမင်းသားကြီး ရှောင်ကွန်နရီ ၊ ဟောလီးဝုဒ် မင်းသမီးချော ဘရွတ်ခ် ရှီးလ် ၊ ကင်မရွန်း ဒဇ် ၊ မော်ဒယ် စင်ဒီ ကရောဖို့ဒ် ၊ ဘောလုံးစတားတွေ ဖြစ်တဲ့မိုက်ကယ် အိုဝင် ၊ အန်ဒရီ ဘိုရိုနင် ၊ အီရန် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်အယာတိုလာ ခိုမေနီ ၊ ဂီတပညာရှင်ကြီး မိုးဇက် ၊ လက်ဘနွန် ၀န်ကြီးချုပ်ရာဖစ်ဟာရီရီ ၊ အိန္ဒိယ ၀န်ကြီးချုပ် ရာဂျစ်ဂန္ဒီ ၊ ကမ္ဘာကျော် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နပိုလီယံ ဘိုနာပတ် ၊ ခရိုက်စလာ မော်တော်ကား ကော်ပိုရေးရှင်းကြီး တည်ထောင်သူ ဝေါ်လ်တာ ခရိုက်စလာ ၊ ဗြိတိသျှ နန်းရင်းဝန်ကြီး ဘင်ဂျမင် ဒစ္စရေလီ ၊ ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခံရတဲ့ အီရတ်သမ္မတဟောင်း ဆက်ဒမ် ဟူစိန် ၊ ကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့ ဖခင်ကြီး ကားလ်မက်စ် ၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့ နောက်ဆုံးခေါင်းဆောင် မီခေးလ် ဂေါ်ဗာချော့ဗ် ၊ အာရေဗျ စစ်သူရဲကောင်း လော့ရင့်စ် (T.E Lawrence) ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ဖခင်ကြီးလီကွမ်ယူး ၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို နာဇီတို့ လက်အောက်မကျရောက်အောင် ကြံ့ကြံ့ခံ ကာကွယ်ခဲ့သူ ၀န်ကြီးချုပ် ဆာဝန်စတင် ချာချီ ၊ ကမ္ဘာကျော် တီထွင်ပညာရှင်ကြီးသောမတ်စ် အက်ဒီဆင် ၊ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သူဂရေဟမ်ဘဲလ် ၊ စာရေးဆရာကြီး ချားလ်ဒစ်ကင်း ၊ Rock အဆိုကျော် ရော့ဒ် စတီးဝပ် ၊ အဆိုကျော် မက်ဒေါနား တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။